BlowToUnlock, afuuf si aad u furto | Wararka IPhone
Fur furahaaga iPhone adoo ku garaacaya mahadsanidiin BlowToUnlock (Cydia)
Waxay si aad ah noogu sii cadaynaysaa in caqliga aaladaha moobiilku aanu ahayn oo keliya astaamahooda, faa iidooyinkooda ama qalabkooda, laakiin in qayb weyn oo ka mid ah hal-abuurnimadu ay ku dhacayso dhammaan horumariyeyaasha ka shaqeeya bixinta barnaamijyada cusub ama yutiilitida qofka isticmaala. Maalmo ka hor ayaan aragnay tusaalaha leh xayaysiis cusub oo ka mid ah iPhone 5S ee ay Apple ku soo bandhigtay magaca 'Riyada'. Mahadsanid goobta Jailbreak isticmaaleyaasha hadda fur qalabkaaga adoo afuufaya, iyada oo aan loo baahnayn in la taabto badhan kasta oo ku yaal terminalka. Magaca Tweak-kan ayaa ah BlowToUnlock waxaana abuuray iakd.
Iyadoo kaliya afuufo makarafoonka, oo ku yaal salka hoose ee moodooyinka iPhone, oo ku xiga dekedda isku xidhka, BlowToUnlock ayaa si otomaatig ah u furi doonta qalabka. Dabcan, marka laga hadlayo haysashada koodh xannibista, wax gebi ahaanba lagu taliyay, annaga na weydiin doonaa inaan galno lambarka ka dib markii uu afuufay. Dhibaatada kaliya ee ku jirta Tweak-ga waa mid kasta buuqa daaqa ama meel leh muusig cod dheer ayaa furi kara qalabka, laakiin markii la rakibo, gudaha goobaha waa qaabeynta BlowToUnlock oo halkaas ayaan ka awoodi karnaa kordhi dareenka makarafoonka buuq. Waxaa lagugula talinayaa inaad kordhiso dareenka caadiga ah si markaa iPhone uusan laftiisa u furin. Waxaa sidoo kale loo qaabeyn karaa si loo afuufo shid shaashadda laakiin aaladda lama furin.
BlowToUnlock aad bay noola muuqatay cajiib ah oo mudan in la ogeysiiyo akhristayaashayada. Lagala soo bixi karaa Cydia keydka BigBoss, waa gebi ahaanba gratuito oo waxay taageertaa qalabka, iPhone, iPad iyo iPod Touch oo leh iOS 7, illaa macruufka u dambeeyay ee 7.1.2.
Ma soo degsatay BlowToUnlock? Sidee u aragtaa Tweak-kan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Jailbreak » Cydia » Fur furahaaga iPhone adoo ku garaacaya mahadsanidiin BlowToUnlock (Cydia)